Puntland:Dabley hubeysan oo weeraro ka geystey magaalada Boosaaso
Home Somali News Puntland:Dabley hubeysan oo weeraro ka geystey magaalada Boosaaso
Fiidnimaddii Axadda waxaa magaalada Bosaaso ee xarunta gobolka Bari ka dhacay laba weerar oo ka kala dhacay laba goobood. Weerarka kowaad ayaa ka dhacay goob jidgooyo ah oo habeenkii ciidamada Boolisku gawaarida ku baaraan waxaana lagu weeraray bomka gacanta laga tuuro, kadibna waxaa la maqley rasaas la is dhaafsanaayo. Goobta ayaa ku dhaw Hotel Yaasmiin oo ku yaala waddada Laamiga ah ee magaalada looga baxo.
In kasta oo maamulka Gobolka Bari si rasmi ah uga hadlin ayaa wararku sheegayaan in hal askeri ku dhintey weerarkaas, waxaana dhaawac soo gaarey saddex qof oo shaah ka cabaayey meherad ku dhaw goobta la weeraray. Horseed Media oo isku daydey in ay ka xaqiijiso laamaha amniga khasaarada weerarkan ayey ka gaabsadeen laamaha amaanku in ay warkan ka hadlaan.
Weerarka labaad ayaa ka dhacay guri uu magaalada ku leeyahay Duqa degmada Carmo oo Bosaso u jirta 90km waxaana Maayorka lagu magacaabaa Maxamed Cali Shire, guriga ayaa ku yaaley Galbeedka magaalada ama halkii la oran jirey Baalade.
Wararku waxay sheegayaan in Duqa Degmada Carmo dhaawac culus soo gaarey kadib marki dabley hubeysan ay bom iyo rasaas ku weerareen xaafaddii uu ku sugnaa. Waxaana ku geeriyoodey mid kamid ah ilaaladiisi, wararka qaar ayaa sheegaya in qofka dhintey uu ka mid ahaa ehelka Maayorka Carmo oo ay dhashey walaashiis, sidoo kale waxaa dhaawac soo gaarey afar qof oo 3 yihiin dumar kuwaas oo guriga ku sugnaa xilliga weerarku dhacaayo.
Dhaawaca duqa Degmada Carmo ayaa la geeyey isbitaal magaalada ku yaala halkaas oo xaaladdiisa lagula tacaalayo.
Ma jirto cid sheegatey labada weerar ee kala duwan. Weerarada lagu qaado inta badan jidgooyooyinka ciidamadu dhigtaan waxaa horey u sheegan jirey al-Shabaab oo dagaal kula jira Puntland.
Somaliland: Qaar Ka Mid Ah Xildhibaanadii Garaacista Loo Gaystay Oo Ku Baaqay In Dalka Laga Bad Baadiyo Saleebaan Iyo Siilaanyo, Sheegayna Inaan Qoraalkaasi Heshiis Lagu Sheegi Karin
War Deg Deg Ah: Qarax Xoogan Oo Imika Ka Hilaacay Muqdisho Iyo Dhimashada